I-Rash kusana olusanda kuzalwa yinto evamile kakhulu. Isikhumba sakhe sinomthelela kakhulu futhi sibucayi ezintweni zangaphandle nezici zangaphakathi. Kungakhathaliseki ukuthi kuyadingeka yini ukwenza okuthile noma ngokushesha ukugijimela kudokotela, ungaboni nakancane izikhumba zesikhumba? Asiqonde!
Okokuqala, ezinyangeni zokuqala ezintathu zokuphila ukushona komntwana osanda kuzalwa kuyinto evamile futhi evamile, ngenxa yokushintsha kwendawo yangemuva ye-hormonal. Kubizwa nangokuthi "i-neonatal acne". Ngomusa lezi zinhlamvu ezincane ezibomvu ebusweni, enhloko, entanyeni nangemuva. Lena inqubo yemvelo, futhi awudingi ukugijima kudokotela.
Ngaphandle kwalokho ungenzi lokhu okulandelayo uma ukushaywa komntwana usanda kuzalwa i-hormonal:
Ungabe usomile ngezixazululo zotshwala nama manganese;
Ungasebenzisi ama-antibiotics kanye nezidakamizwa ezilwa ne- anti-allergenic ;
Ungafaki indawo ecasuliwe nge-talc.
Siza ingane ingabhabha nsuku zonke emanzini abilisiwe, igubha ekamelweni futhi ivuse umoya. Futhi kuphela uma kwenzeka ukuqhuma kuthatha izingxenye ezibalulekile zomzimba, kubalulekile ukubona udokotela. Ngokuvamile, ezimweni ezinjalo, ukhilimu oqukethe i-ketoconazole umisiwe.
Lapho uneminyaka engaba yintathu kuya eminyakeni eyodwa nengxenye, ukushaywa komntwana osanda kuzalwa kungaba uphawu "lwezinyosi ezincane" - lezi zivalo ezithintekayo nge-dot dot emaphakathi. Lapha, ngaphandle kwezingane ezingakwazi ukuzenza - kumele anikeze ukwelashwa futhi aqaphele umphumela.
Ukuqhuma emzimbeni wengane engasanda kuzalwa kungaba yinto enobungozi engenabungozi, nokusabela okweqile, nesifo sezifo ezithathelwanayo eziyingozi, ezifana nesimungumungwane, umkhuhlane omnyama.
Izambatho ezinomsoco neziqinile, ukungahambisani nemithethonqubo yokuhlanzeka kungaholela ekubukeni kwe-sweating - ukuqhuma kwama-bubbles amancane kagesi emhlanjeni yesikhumba noma ku-groin, ngezinye izikhathi ngokushaya. Ukunqoba ukushayeka okunjalo ebusweni olusanda kuzalwa kulula - kaningi ukushiya ingubo ngaphandle kokugqoka, ungayibopheli, ventilate igumbi futhi ugeza njalo umntwana. I-itch izosusa i-compress ngesisombululo soda.
Ukwethulwa kokudla okuhambisanayo noma ukusetshenziswa kokudla-izifo ekudleni komama kungabangela ukushona emntwaneni. Ngokuvamile kubonakala njengamabhaltri ashisa. Lapha isixazululo sinye - zama ukunciphisa ukusetshenziswa kwemikhiqizo ye-allergen: ubisi lweenkomo, izithelo ze-citrus, amantongomane, ushokoledi nezithelo ezimibalabala, imifino kanye namajikijolo.
Lokhu ukusabela kwesikhumba kwisisusa sangaphandle, isibonelo, i-powder ye-detergent, izinwele ze-petry kanye nezintuthwane. Khetha i-powder hypoallergenic yokugeza izingubo zezingane.
Uma ukubukeka komzimba emzimbeni wengane kuhambisana nokuwohloka kwempilo, umkhuhlane, isifo sohudo, umkhuhlane, noma umphimbo; Uma i-rash ikhula kuwo wonke umzimba, noma uma i-fluid ivela ezimpilweni - bheka udokotela ngokushesha! Kungenzeka ukuthi yisiphi sezifo ezithathelwanayo:
I-Roseola noma i-fever yezinsuku ezintathu zezingane;
Ngenkathi yokwelashwa, ingane izodinga ukuhlukaniswa nabanye futhi isebenzise imithi, okudokotela kuphela ongayichaza!
Yilalela impilo yengane yakho futhi ngokuhamba kwesikhathi uxhumane nomtholampilo. Impilo kuwe nomntanakho!
Ingabe kuyingozi uma i-lymphocytes ikhuliswa ezinganeni?
Umhlangano wokugcina wabazali eqenjini eliphakathi le-enkulisa. Izihloko, i-algorithm yokuqhuba
Breathing izivivinyo e Bodyflex
Homemade poppy-okuyigugu: iresiphi ngesithombe
Futhi uyazi ukuthi kungakanani ukukhokhela umama ngokwesivumelwano?
"Victoria" (ukuzilibazisa isikhungo): incazelo, oxhumana nabo kanye nokubuyekeza